SparkyLinux 5: iyo yekunze-nzira isina kurema distro | Linux Vakapindwa muropa
SparkyLinux Icho chakareruka uye chinokurumidza chiPolish sosi yekuparadzira yakavakirwa paDebian ino isiri nguva yekutanga yatinotaura nezvayo pano. Iyo Rolling Regedza sezvo ichivakirwa paDebian bvunzo vhezheni, uye kwete pabazi rakagadzikana rinononoka kuburitswa kwayo kwemwedzi. Ino nguva isu tichataura nezve iyo SparkyLinux 5 vhezheni, iyo nyowani vhezheni iyo yakwanisa kutora vamwe vashandisi vanoiona iri yakanakisa kurema kugovera kwekushandisa kwese. Nibiru izita rekodhi rakapihwa iyi vhezheni itsva 5.0, asi… ine chii?
Ichokwadi ndechekuti kugovera kunopa features Zvese zveNewbies munyika yeLinux uye yeavo vashandisi vanotova neruzivo rwepamberi muLinux, vasingatarise chete pane imwe yeiyi niches sezvazvinoitika pamwe nekupihwa kweGNU / Linux. Avo vanotsunga kurodha pasi vachakwanisa kusarudza pakati penzvimbo dzakasiyana-siyana dzedesktop nemaneja emahwindo ayo anotipa, senge LXDE, E19, Openbox, MATE, LXQt, KDE, JWM, nezvimwe, zvese zvakagadziridzwa kune dzazvino shanduro dziripo.
With the Inotyisa MinimalGUI Ichatipa iri nyore nyore zvinyorwa-zvakavakirwa nharaunda kana neOpenbox kana JWM, ese akareruka zvakanyanya, anotibvumidza kushandisa Sparky Yepamberi Installer kurodha base system neiyo shoma seti yematurusi. Uye ikozvino ini ndinotsanangura izvo zvakataurwa mundima yapfuura kuti zvirege kutungamira mukusanzwisisana, SparkyLinux haina hushamwari kune avo vatsva kuLinux nyika, asi ichokwadi kuti inogona kuvapa yakanaka yekudzidzira curve, zvirinani pane mamwe ma distros. .
Vashandisi vanogutsikana ndizvo zviri kutsvakwa nevagadziri vayo, uye nekuda kwekuoma kwayo kushoma, ichaita kuti vashandisi vawane ruzivo rwemberi nezve komputa. Nenzira, kunze kweiyo Sparky Avanced simaki yakagadzirirwa vashandisi vemberi, kune dzimwezve nzira dzekumisikidza, senge iyo Calamares universal installer. Iyo yakapusa graphical inosimudza iyo ichaita kuti kuisirwa kuve nyore ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » SparkyLinux 5: iyo yakareruka off-road distro
Chinyorwa chakanaka, ini ndakanyatso gadza iro diki gwara uye ndikaisa pantheon mariri. Icho chakareruka uye chakanakisa pane zvese chiri kuburitsa kuburitswa.
mhoro, asi kana yakavakirwa pakuongororwa kwedhiian, hakusi kuchenesa kwakachena, handiti? kana iri muchikamu chinotonhora chekuyedzwa kwedebian isu hatizove nezvazvino mumamiriro edesktop semuenzaniso, kana izvi distro inoshandisa zvinyorwa zvaro zvinogara zvichishandurwa ???
Michael DellDor akadaro
Zvirokwazvo, kana kuyedzwa kuchinge kwaomeswa nechando, mapakeji kubva kuDebian repositories (iyo yakawanda kwazvo) akaomeswa nechando. Nekudaro, izvi hazviwanzo kugara kwenguva refu uye munguva pfupi unokwanisa kuenderera uchigadzirisa senguva dzose ... ndanga ndichizvishandisa kwemakore mashoma, neiyo inokurumidza uye inoshanda LxQt uye ini ndinofunga ndapfuura nemaviri maDebian vhezheni pasina chiitiko. Kwenguva iyoyo, kana iwe uchifarira kuve ne "wekupedzisira" unogona kumisikidza maSid repos
Pindura Miguel DellDor
ndezvipi zvinodiwa ?? vakayamwa :(
Pindura kuna sekuru